Ugu Wanaagsan 304 316 Ahama Birta Ballaarinta Ballaarinta Ballaaran Iyadoo Soo Saaraha Qiimaha Ugu Fiican | Feejignaan
Boodhadhka xargaha, oo sidoo kale loo yaqaan geckos dayactirka baabuurta, waxay leeyihiin adeegsiyo kala duwan, oo ka bilaabma qalabka farsamada ilaa buundooyinka dhisidda. Sababtoo ah qaaska ah ee qaabdhismeedkeeda, rakibidda boodhadhka loo yaqaan 'wedge bolts' way ka duwan yihiin boodhadhka kale ee barroosinka, sidaa darteed layaab ma leh in farqi weyn u dhexeeyo siligga iyo iska caabbinta xiiridda.
Maaddaama mid ka mid ah barroosinka barroosinka inta badan loo adeegsado dhismaha darbiga daahyada, handarraabbadeedda loo yaqaan 'Wedge bolts' badanaa waa alaab caan ah, oo inta badan loo adeegsado in lagu dhejiyo walxaha nooca loo yaqaan (sida qalabka, birta kanaalka, biraha hagaha, biraha, iwm.).
Boodhadhka xargaha, oo sidoo kale loo yaqaan geckos dayactirka baabuurta, waxay leeyihiin adeegsiyo kala duwan, oo ka bilaabma qalabka farsamada ilaa buundooyinka dhisidda. Sababtoo ah qaaska ah ee qaabdhismeedkeeda, rakibidda boodhadhka 'wedge bolts' way ka duwan yihiin boodhadhka kale ee barroosinka, sidaa darteed layaab ma leh in farqi weyn u dhexeeyo siligga iyo iska caabbinta xiiridda. Boodhadhka barroosinka waxaa lagu hagaajiyaa mabda'a khilaaf baaxad weyn oo u dhexeeya geeska barroosinka oo dhan iyo sheyga darbiga godkiisa iyada oo la sii ballaarinayo tuubada Marka la barbardhigo handarraabbadeedda barroosinka kiimikada, xoogga culeyska-qaboojiyaha ee loo yaqaan 'Wedge bolts' ayaa waxyar ka liita
Imtixaanka ka bixida ee handarraabbadeedii 'Wedge bolts', barokac bilow ah ayaa guud ahaan la soo saaray. Waqtigaan, barxadda barroosinka waxyar ayaa laga dabcay. Guud ahaan, barakaca bilowga ah ee loo yaqaan 'Wedge bool' oo ah M12 waa 11-13KN, oo sidoo kale muujineysa xoogga jiidaya ee loo yaqaan 'Wedge bool'. Awoodda soo-bixintu way hooseysaa, qiyaastii 1/3 oo ka mid ah barroosinka kiimikada. Marka la barbardhigo, iska caabbinta xiiriddu waa isku mid.
(1) Marka loo eego kala-soocidda dhex-dhexaadinta: inta badan M8 × 60, M8 × 90, M10 × 100, M12 × 120, M16 × 140, M24 × 170. Intaas waxaa sii dheer, maxaa yeelay majiro qeexitaan heer qaran oo ku habboon, dhererka qarka dambe ee isla dhexroor isku dhejisku ma aha mid isku mid ah. Tusaale ahaan, marka qotodheerida barxadda M10 Wedge ay tahay 70mm, dhererka usha wuxuu noqon karaa 110mm, 120mm iyo qeexitaanno kale, waana la mid runta moodooyinka kale.
(2) Kala soocida sida ku xusan dahaadhka: qaboojiyaha galvanized boorsada barroosinka, faleebada kulul ee faashadku iskujiraan, qaabka naqshadeynta hadda waa inta badan waxyaabaha birta kaarboon. Dhumucda lakabka galvanized ee kuleylka kuleylka kulul ee loo yaqaan 'Wedge anchot bolt' waa qiyaastii 50um, taas oo ah 3-5 jeer dhumucda lakabka qaboobaha-qabow. Hawlo kala duwan awgood, galvanized qabow way adag tahay in la isku daaro daahan. Dabcan, nolosha adeegga badeecadaha galvanized kulul ayaa aad uga dheer tan kuwa alaabada galvanized qabow.
(3) Lagu kala soocay maadada: biinanka biraha barroonka birta, birta birta birta leh. Birayaasha barroosinka birta kaarboon sidoo kale waxaa loo qaybin karaa 4.8 barroosinka, 5.8 barroosinnooyinka, 6.6 barroosinnada, iyo 8.8 barroosinka barroosinnada iyadoo loo eegayo xooggooda farsamo ahaan. Bir aan xadi lahayn ayaa loo qaybin karaa qalabka 304 iyo 316, laakiin qiimaheedu waa qaali. Guud ahaan, handarraabbadeedda birta birta ah inta badan waxaa looga isticmaalaa suuqa, qabow-galvanized ayaa badanaaba.
Hore: Shiinaha wuxuu soosaaraa cabbirka cabbirka cabbirka kaladuwan ee kaladuwan ee birta ah
Ballaarinta Barroosinka Bolt M12
Ballaarinta Bolt Price
Ballaarinta Boolal M16
Balaastiigada Balaadhinta Galvanized
Lagu Sameeyay Shiinaha Balaarinta Kiimikada Barroosinka
Ballaaran Birta Ballaashida
Ballaarinta istaandarka ah
Shiinaha soo saaro dun size kala duwan hex hea ...